Umxholo womculo kunye nombhalo O Tannenbaum ushicilela i-Kiunder
O mthi weKrisimesi - amanqaku kunye nokubhala
O mthi weKrisimesi-umbhalo
Umxholo womculo kunye nombhalo O mthi weKrisimesi
O mthi weKrisimesi, o Umthi weKrisimesi,
indlela eluhlaza ngayo amaqabunga akho.
Awunalo kuphela oluhlaza elutyeni,
Hayi, nakubusika, xa iqhwa
indlela eluhlaza ngayo amaqabunga akho!
Zingaphi kangangexesha leKrismesi
Umthi wakho uyavuya kum!
Ingubo yakho ifuna ukungifundisa into!
Ithemba kunye nokuhlala isigxina
unika induduzo kunye namandla nanini na!
Vula umculo wefayile yeKrismesi u-O Tannenbaum njengefayile yezobugcisa
Ukuzonwabisa kwiKrismesi yonke indawo - amanqaku kunye nokubhala